5 Talooyin Tafatirka Fiidyowga ee Suuqlayda | Martech Zone
Axad, Febraayo 9, 2020 Axad, Febraayo 9, 2020 Halley Johnson
Suuqgeynta fiidiyowga ayaa noqotay mid ka mid ah hababka ugu sarreeya ee suuq looga dhigto tobankii sano ee la soo dhaafay. Iyada oo qiimaha qalabka iyo barnaamijyada tafatirka hoos u dhacayaan maadaama ay si aad ah u isticmaalayaan, waxay sidoo kale heshay wax badan oo la awoodi karo Wax soo saarka video waxay noqon kartaa mid khiyaano leh si aad xaq ugu hesho dhowrka jeer ee ugu horreeya ee aad isku daydo.
Helitaanka habka saxda ah ee loo dejiyo fiidiyoowga suuqgeynta ayaa ka adag tifaftirka caadiga ah. Waa inaad ku dhejisaa sheygaaga nalka ugu fiican ee suurtogalka ah adoo waliba sameynaya muuqaal cajiiba. Waxa ugu muhiimsan ee aad u baahan tahay inaad sifiican wax uga beddesho fiidiyowga waa khibrad. Inta badan ee aad sameyso sida ugu fiican ee aad ku heli doonto.
Had iyo jeer waxaa jira qalab iyo tabaha yar si ay kaaga dhigaan tafatire fiidiyoow wanaagsan si dhakhso leh. Tani waa liiska dhowr tilmaam iyo tabaha si ay kaaga dhigaan suuq wax ku ool ah oo fiidiyowyadaadu uga dhigaan kuwo isla markiiba kafiican.
Talo 1: Bilow Qallafsan
Micno malahan ka shaqeynta arrimaha waqtiga ama muuqaalka fiidiyow kahor intaadan dhisin goyn adag. Wada jir u jarista kaliya waxay ubaahantahay inaad kudhigto dhamaan guntimahaaga ugufiican ee isku xigxiga si aad uhesho fikrad aad uqurux badan oo ah clips-yada aad isticmaaleyso iyo meesha ay ubaahanyihiin inay ahaadaan Taasi waxay fududeyneysaa tafatirka oo waxay kuu sheegi doontaa clips-yada aad u baahan tahay.
Qaybtani uma muuqan doonto wax qurux badan. Waxaad kuheleysaa fiidiyowyo aan loo habeynin oo nidaamsan oo midkoodna uusan wada shaqeyn doonin wali. Ha ku jahwareerin markan maxaa yeelay tani waa qaybta aanu fiidiyowgaagu wali u bilaaban inuu qaab yeesho.
Qaadashada agabbarkaaga oo aad u geliso amar qallafsan ayaa ah meesha ugu fiican ee laga bilaabi karo. Looma baahna in la bilaabo cambaareynta shaqadaada ama aad xanaaqdo waqtigan. Looma malaynaynin inay fiicnaan u muuqato haddana waxaa loo malaynayaa inay nidaam tahay.
Talada 2aad: Ha Badin Wax Ka Beddel
Ilaa aad ku kaftamaysid filim ficil ah ma jirto sabab aad wax badan ugu darto fiidiyahaaga inta lagu jiro hawsha tafatirka. Gaar ahaan haddii aad hadda bilaabeysid waxay umuuqan kartaa madadaalo badan inaad isticmaasho dhammaan saameynta iyo qeylada gaarka ah ee barnaamijka tafatirkaagu bixiyo. Ha sameyn taas, uma muuqan doonto wax fiican ama xirfad leh.
Kala-guurkaaga ka dhig mid fudud oo dabiici ah. Uma baahnid inaad haysatid fiidiyoow ka weecinaya waxaad isku dayeyso inaad iibiso ama u muuqda mid ciriiri ah. U ogolow fiidiyahaagu inuu iska hadlo isaga oo aan barnaamijka tafatirkaaga wax ka dhigayn.
Tafatirkaagu waa inuu u dhigmaa midabka fiidiyowga isagoon beddelin farriinta guud. Tafatirka softiweerku waa wax lagu farxo in lagu ciyaaro waana sahlan tahay in lagaa qaado. Way ka fiican tahay in wax laga beddelo oo lagu daro waxyaabo ka badan inta ay tahay in laga badiyo oo ay tahay in la gooyo tan waxyeellooyin ah.
Talada 3aad: Adeegso Software wanaagsan
Waxaa jira boqolaal barnaamijyada tafatirka fiidiyowga waad iibsan kartaa ama ku heli kartaa bilaash. Hubso inaad sameyso cilmi baaris ka hor intaadan ballanqaadin barnaamijka tafatirka. Farqiga u dhexeeya fiidiyow weyn iyo midka xun ayaa hoos ugu soo dhacaya barnaamijka aad isticmaaleyso.
Badanaa waxaa lagaa doonayaa inaad bixiso barnaamijka tifaftirka ee wanaagsan. Ha ka nixin qiimaha aysan qaali ahayn oo had iyo jeer u qalma lacagta dheeriga ah. Fiiri dib u eegista iyo waxa tafatirayaasha xirfadleyda ah ay ka yiraahdaan softiweerka intaadan iibsan ka hor si aad u ogaato inaad ku kalsoon tahay.
Mar alla markii aad doorato barnaamijyadaada tafatirka waxaad u baahan tahay inaad barato sida loo isticmaalo sida ugu macquulsan. Fiiri fiidiyowyada youtube-ka ee jabaya sida wax waliba u shaqeeyaan oo u akhri waraaqo badan oo sida loo-qoro ah oo kuu sharixi kara xirfadaha qaarkood. Sida ugufiican ee barnaamijkaagu ufiican yahay ayaa fiidiyowyadaadu ufiicnaan doonaan.
Talada 4aad: U Fiirso Muusikada
Waxaad dooneysaa inaad hesho meelo badan oo kala duwan oo aad ka hesho miridhkulmusic-ty-lacag la'aan ah online waqtigaaga tifaftire ahaan. Hubso inaad u isticmaasho muusikadaas si taxaddar leh oo aan badnayn. Muusikada badan ee waqtiga khaldan waxay gabi ahaanba burburin kartaa muuqaalka fiidiyowga.
Waxa ugu horreeya ee aad u baahan tahay inaad sameyso markii aad dooranaysid muusigga waa inaad hubiso inay bilaash tahay adeegsiga ama inaad haysato lacag miisaaniyad ah oo lagu bixiyo muusikada. Kadib waxaad ubaahantahay inaad go aansato nooca muusikada sida ugufiican ugu socon doonta fiidiyowga suuqgeynta. Muusikada jilicsan ama muusikada degdega ah ayaa gabi ahaanba beddeli kara fiidiyow markaa hubi inaad si sax ah u doorato oo laga yaabo inaad isku daydo dhowr xul oo muusig oo kala duwan.
Ugu dambeyntiina, waxaad u baahan tahay inaad hubiso in muusiggu runtii uu wax ku daro fiidiyowgaaga. Haddii muusiggu yahay uun wax dheeri ah oo aan wax isbeddel ah ku samaynayn fiidiyoowga marka loo eego sida ugu fiican ee laga yaabo in laga daayo muusikada Muusiggu wuxuu badali karaa fiidiyow laakiin marwalba looma baahna.
Talada 5aad: Wax Walba Ma Bedeli Kartid
Barnaamijka tafatirka fiidiyowga waa mid cajiib ah oo hagaajin kara waxyaabo badan oo aad dareemi karto in wax walba lagu hagaajin karo wax soo saarka ka dib. Taasi run maahan oo hadaadan duubin fiidiyowga aad tafatirinayso waxaad dareemi kartaa xittaa cadaadis dheeri ah oo ah inaad filimka u ekaato mid weyn si aadan khalad ugu helin eedeyn. Runtu waxay tahay inay jiraan waxyaabo aan xitaa tafatirka weyn uusan hagaajin karin.
Waad ku hagaajin kartaa laydhka iyo codka badankood barnaamijka tafatirka laakiin waxaa laga yaabaa inaadan awoodin inaad ka dhigto mid kaamil ah. Wax qalad ah kuma jiraan in aan la sixi karin wax ku qasmay duubista filimka. Tafatirkaagu wuxuu u joogaa inuu hagaajiyo waxyaabaha aad kari karto oo aad wax walba uga sii wanaajiso, ma ahan inaad sameyso mucjisooyin.
Sii nasasho oo xusuusnow in xitaa tifaftireyaasha ugu fiican aysan hagaajin karin fiidiyow xun. Samee sida ugu fiican ee aad kari karto oo hubi inaad ku faanto shaqadaada. Ma awoodi doontid inaad wax walba hagaajisid laakiin waxaad ka dhigi doontaa wax kasta oo yimaada si ka wanaagsan sidii ay ahayd ka hor intaadan bilaabin.
Tifaftirka fiidiyowga waa shaqo aad baraneyso markaad socoto. Inta badan ee aad wax ka bedesho ayaa ka sii fiicnaan doonta waxaad ka heli doontaa adeegsiga softiweerka iyo ogaanshaha waxaad sameyn karto. Markaad barato waxaad noqon doontaa tifaftire wanaagsan waxaadna ku raaxeysan doontaa shaqadaada xitaa inbadan.
Tifatirayaasha waaweyni way ogyihiin in qoraalkooda xun uu noqon doono mid aad u qallafsan waana caadi. Software-ka ayaa ah waxa ugu muhiimsan ee tifaftiraha adeegsado sidaa darteed hubi in taadu ay tahay tan ugu sareysa, mar walbana wax ka bedel lagu sameeyo ka hor intaadan wax ka badalin. Ma jiraan wax aad kaga sii wanaajin kartid tafatirka laakiin sidoo kale waxaad wax uga dhigi kartaa wax waalan haddii aad wax badan qabato.
Ugu dambeyntiina, xusuusnow inaad tihiin editor, ma sixirroole. Waxaa jira waxyaabo aadan awoodi karin inaad saxdo oo waa caadi. Kuwani waa dhowr tilmaamood oo kaa caawinaya inaad tifaftire ka fiican u noqoto suuqgeynta fiidiyowyada.
Tags: Fiidiyowyada Suuqgeyntaqallafsantalooyinficil videosoftware ah
Halley Johnson waa qoraa madaxbannaan oo tifaftire. Ayaa hada shaqeeya Earlylightmedia.com. Waxay leedahay dhowr qaybood oo daabacan oo ku hoos jira magac been abuur ah. Badanaa waxay ka kooban yihiin gabayo ka hooseeya celcelis ahaan. Halley hadda waxay ku guda jirtaa qorista buugeedii dhererkeedii ugu horreeyay oo buuxa (dhab ahaantii waxay ku hoos jiri doontaa magaceeda dhabta ah). Waxqabadka ugu weyn ee ay gaadhay waa inay hooyo fiican u noqoto doofaarkeeda iyo inay celcelis ahaan gabadheeda waalidkeed u noqoto.
Termly: Si fudud u maamul u hoggaansanaanta goobahaaga iyo barnaamijyadaada